Dowladda Maraykanka Soomaaliya Oo dhan waa in dab laqabadssiya si ay… - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Dowladda Maraykanka Soomaaliya Oo dhan waa in dab laqabadssiya si ay…
Dowladda Maraykanka Soomaaliya Oo dhan waa in dab laqabadssiya si ay…
USA (Banaadirsom)-Brian Castner ayaa wargeyska the New York Times ku qorey maqaal dheer oo uga hadlayo xaaladda Soomaaliya.
Waxaa uu maqaalkaasi cinwaan uga dhigay “dal dhan ayaa dab la qabadsiinayaa”.
Waxaa uu qoraagu sheegay in uu Muqdisho kula kulmay nin da’ yar balse gar leh, oo ay ka muuqato siigo ka soo gaartay safarkii uu ku yimid Muqdisho. Waxaan ugu yeeri doonaa Cali, ayuu yiri.
Cali waxaa uu leeyahay xaas iyo afar carruur ah, wuxuuna ari ku dhaqaaleysanayay mid ka mid ah tuulooyinka yaryar ee ku teetsan webiga Shabeelle, halkaas oo ah goobta ugu badan ee lagu beero raashiinka laga cuno Soomaaliya.
Bishii Sebtembar ee sannadkii tegay, aniga iyo dhowr shaqaale oo ka tirsan hay’adda Amnesty International ayaa gaaray Muqdisho si aan u wareysanno dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay weerarrada Maraykanka ee Soomaaliya.
Weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka ayaa aad u kordhay tan iyo markii uu Donald Trump noqday madaxweynaha Maraykanka.
Trump ayaa baddelay xeerkii adkeynayay in dad rayid ah la bartilmaameedsado.
Maqaalka waxaa uu sheegay in labadii sano ee la soo dhaafay, iyo dhworka bilood ee sannadkan laga qaatay, uu Maraykanka geystay ku dhawaad 120 weerar.
Amnesty ayaa eegtay saameynta ka dhalatay shan weerar oo keliya, waxayna ogaatay in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen weerarradaasi. Waxaa intaa sii dheer in hoggaanka ciidammada Maraykanka ee Afrika, AFRICOM, uu sheegay inay dileen oo keliya labo qof oo rayid ah.
Dowladda Maraykanka ee iska indha-tireysa dadka rayidka ah ee la dilayo waxay la mid tahay iyadoo waddan dhan dab qabadsiinayso.
Wasaaradda difaaca ee Maraykanka wayba diidan tahay inay ka hadasho dadka rayidka ee lagu laayo weerarradaas.
Dalka Soomaaliya waxaan wareysannay dad kor u dhaafayo 100 qof, oo aan kala hadalnay weerarrada ka dhaca dooxada Shabeelle. Qaarkood waxay ka yimaadeen goobo ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab, qaarka kalena waxay ka yimaadeen deegaannada barakacayaasha ee Muqdisho, intooda bandanna luuqad aan af Soomaali ahayn kuma hadlaan.
Balse hal shay ayay ka sinnaayeen, dhamaantood cirka ayay farta ku taagayeen, waxayna tilmaameen diyaaradaha Maraykanka ee aan duuliyaha lahayn.
Sheekada Cali ayaa ka duwan dhamaan dadka kale. Wuxuu sheegay in baabuur nooca Toyota SUV uu dhexmararay tuulada uu degganaa ka hor intaan qarax lala beegsan.
Gantaalkii ugu horreeyay, waa lala gafay, oo wuxuu ku dhacay aqal hoorri meesha ka ag dhawaa. Gantaalkii labaad ayaa lala helay, waxaana loo maleynayaa in halkaas lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Cali wuxuu sheegay in afar qof oo rayid ah ay ku dhinteen gantaalkii koobaad; oo ay ka mid ahaayeen carruur, oo mid ka mid ah uu Cali sheegay in hilibkiisa laga dhex-saari waayay arri qaraxa ku le’day, “qaab aan u duugno ayaan garan waynay,” ayuu yiri
Warbixntan la guma soo koobi karo baaxadda ay la egtahay dadka rayidka ah ee lagu laayay Soomaaliya, maxaa yeelay ma qori karno waxaan aaminsannahay inay dhaceen, balse waxaan wax ka qori karnaa oo keliya waxyaabaha aan caddeynta u hayno.